9 Khaladaadka Degista ee Ay Tahay Inaad Ka Fogaato | Martech Zone
Talaado, Juun 16, 2015 Talaado, Juun 30, 2015 Douglas Karr
Waad la yaabi lahayd sida ay waxyaabo badani u mashquuliyaan qof bogga ay ku yimaadaan. Badhannada, marinnada, sawirrada, qodobbada rasaasta, ereyada geesinimada leh… dhammaantood waxay soo jiitaan dareenka booqdaha. In kasta oo taasi ay tahay waxtar marka aad bogsanayso bog oo aad si ula kac ah u dejineyso waxyaabahaas booqdaha inuu raaco, ku darista cunsur khaldan ama canaasiir dheeri ah ayaa ka qaadi karta booqdaha booqashada-ficilka aad rabto inaad ku riixdo iyo badalo on.
Copyblogger wuxuu sii daayay macluumaadkan cajiibka ah ee abuuraya isbarbardhiga u dhexeeya booqdaha bartaada iyo qof raacaya tilmaamaha, 9 Goof Deg Deg ah oo kaa dhigaya inaad Ganacsi lumiso. Runtii waan jeclahay isbarbar dhigaan maxaa yeelay waa wax aad ufiican markaad ka fikirto safarada aad qaadanaysid.
Waxa ugu horreeya ee aan ku qabanno safar waa khariiddada asalka iyo halka loo socdo, ka dibna bixino jidka ugu wax ku oolka badan ee u dhexeeya. Markaad tahay khariidaynta boggaaga degitaanka, waxaan rajeyneynaa inaad isla wax sameyso - oo aad ka fikirto meesha martidaadu ka imaanayaan oo aadan ka tagi doonin wax su'aal ah sida loo socdo. Waa kuwan 9 qalad guud waad sameyn kartaa markaad abuureyso bogagga degitaanka (laakiin waa inaad iska ilaalisaa):
Ma aadan sharxin Faa'iidooyinka diinta.
Ma aadan bixin a waddo fudud oo loogu beddelo.
Si cad uma aadan soo bandhigin a hal meel ama natiijada.
Ma aadan sameyn la xiriiraan macluumaadka muhiimka ah wax ku ool ah.
Ma aadan sameyn tirtiro waxyaabaha aan loo baahnayn.
Aad ayaad u isticmaashay erey iyo ereyo adag.
Kumaad taageerin macluumaadkaaga macluumaadka, faahfaahinta iyo marqaatiyada kor u qaad kalsoonidaada.
Ma aadan sameyn ka saar xulashooyinka dheeraadka ah sida hagista iyo xiriiriyeyaal dheeri ah.
Ma aadan hubin boggaaga degitaanka dhakhso u raran!
Tags: erey adagfaa'iidooyinka beddelaadcopybloggercagaereymacluumaadka muhiimka ahdejinta bogga naqshadadeg deg bogga goofsdegitaanka bogga infographickhaladaadka bogga degistahagaajinta bogga degistawadada loo rogotaageeraya waxyaabahamarqaatiyaalwaxyaabo badan